बिहीबार १०८ जना कोरोना संक्रमित थपिए : नेपालमाला
बिहीबार १०८ जना कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं : नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या १६ हजार पाँच सय ३१ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १०८ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै संक्रमितको संख्या १६ हजार पाँच सय ३१ पुगेको हो।
बुधबार २५५, मंगलबार २०४ र सोमबार १८० जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका २५ पीसीआर प्रयोगशालामा चार हजार पाँच सय ८८ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण घट्दै गएको र जनजीवन सामान्य बन्दै जाँदा भिडभाडले अझ खतरा हुने प्रति सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या घट्नु संक्रमणको जोखिम घट्नु नभएको भन्दै उनले सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरेका हुन् ।
अहिले क्वारेन्टाइनमा २४ हजार ४ सय २५ जना रहेका छन् भने आठ हजार ६ सय ५ जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइराखेको छ। पछिल्लो २४ घण्टा एक सय ३९ जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या भने सात हजार आठ सय ९१ पुगेको छ।